ခုလို IT ခေတ်ကြီးထဲမှာ ရိုးရိုးMarketing တွေပဲ သုံးနေကြဦးမှာလား?? 樂樂
By T-WORK SYSTEM | July 11, 2018 | 0
ခုခေတ်မှာဆိုရင် လူတွေက Facebook လိုမျိုး Social Media တွေမှာ ရှိနေကြတဲ့အချိန်ကများတဲ့အတွက် Facebook မှာ Marketing လုပ်တာက လုပ်ငန်းကို ပိုမိုတွင်ကျယ်စေမှာပါ  ကဲ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ T-WORK SYSTEM ကနေ ထူးခြားဆန်းသစ်လှတဲ့ Digital Marketing နည်းလမ်းတွေနဲ့ Social Media မှာ သင့်လုပ်ငန်းပိုမိုအောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါရစေ ထူးခြားတဲ့Digital Marketing တွေဆိုတာ ဘာတွေပါလိမ့် 樂 ဟုတ်ကဲ့ ဒီလိုအချက်ကလေးတွေနော် 1️⃣ လုပ်ငန်းအတွက် Post များ Create လုပ်ပေးခြင်း 2️⃣ Post တွေအတွက် ခေတ်မှီဆန်းသစ်လှတဲ့ Photo များ ဖန်တီးပေးခြင်း 3️⃣ Digital Flyer , Carousel…
ပစ္စည်းအသစ်ထွက်ရှိလာတိုင်း ဈေးနှုန်းတွေအသစ်ပြောင်းလဲတိုင်း Catalog စာအုပ်ကြီးတွေ ထပ်ထုတ်နေဦးမှာလား ❓❓
By T-WORK SYSTEM | June 30, 2018 | 0
Catalog Book  ရှိလားတဲ့ မရှိဘူးတဲ့  Product Catalog Book တွေသုံးပါလားတဲ့ ဆက်မမေးရဲတော့ဘူး ကြောက်လာပြီ T-WORK ရဲ့ Catalog App  ပဲ သုံးမှာ 珞 ထပ်မမေးနဲ့တော့တဲ့ Free download Demo Catalog App အခုလို IT ခေတ်ကြီးမှာ စာအုပ်တွေထက် ဖုန်းတွေက အသုံးများလာပီနော်   Catalog Book တွေသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း စာအုပ်ရဲ့အရွယ်အစားကြီးလာတာနဲု့အမျှ သယ်ဖို့ကလည်းအဆင်မပြေဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။ ဒါကြောင့် စိတ်ကူးမိကြဖူးမှာပေါ့။ စာအုပ်ကြီးကို ဖုန်းထဲထည့်ယူသွားလို့ရရင် ကောင်းမှာပဲလို့။ ကဲ စိတ်ကူးလေးတွေ အမှန်အကန်ဖြစ်လာပါပြီနော်။  စီးပွားရေးသမားများအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်Product တွေ အကြောင်း Customer တွေကို ပြချင်တဲ့အခါမှာ…
By T-WORK SYSTEM | June 14, 2018 | 0
ကဲ အဲ့လိုထပ်ထုတ်စရာမလိုဘဲ Catalog ထဲက Data တွေ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အမြဲပြင်ဆင်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ Mobile Catalog App လေး သုံးကြရအောင်။။  Mobile Catalog Application ??樂 Catalog Application ဆိုတာ တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး ပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့ Calatog စာအုပ်ကြီးတွေကို ကိုယ်နဲ့တပါတည်း သယ်ယူသွားလို့ရအောင် ဖုန်းထဲကို ထည့်ထားလိုက်တာပါ  စီးပွားရေးသမားများအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်Product တွေ အကြောင်းကို ပြောပြထားတဲ့ Catalog စာအုပ်တွေကိုသာ အသုံးပြုနေဦးမယ်ဆိုရင် Product အသစ်ထွက်ရှိလာတိုင်း ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲလာတိုင်းမှာ စာအုပ်အသစ်အသစ်တွေ ထပ်ထုပ်နေရဦးမှာပေါ့။ စာအုပ်ထဲက Data တွေများလာတာနဲ့အမျှ စာအုပ်ရဲ့အရွယ်အစားကလည်း ပိုမိုကြီးလာတဲ့အခါ သယ်ယူသွားဖို့ကလည်း အဆင်မပြေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Mobile Catalog App ကိုသာ အသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုပြသနာတွေ…
ဘေဘီ့ကို မေးလိုက်ပါ Facebook Page ပဲ သုံးနေတော့မှာလားလို့ အရမ်းမိုက်တဲ့ Website သုံး ကြည့်မလားလို့ ☺️
By T-WORK SYSTEM | June 11, 2018 | 0
ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် လူတွေက များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေးအကြောင်း ကိုယ့်Product တွေအကြောင်းကို Facebook Page ထောင်ပြီး ကြော်ငြာလာကြပါတယ် ။ Facebook Page က ပြုလုပ်ရတာ လွယ်ကူပြီး ငွေကုန်ကြေးကျလည်း သက်သာတာမို့ လူတွေက Website ထက် Facebook Page ကိုပိုပြီး အားသာကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေရှည်ကျ Website နဲ့ Social Media ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုတာက သာမန်ရိုးရိုး Facebook Page တွေထက် ဘာကြောင့် ပိုမို ကောင်းမွန်တာလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါမယ်နော်။  Facebook Page မှာ ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက အောင်မြင်နေပြီး ကိုယ့်Product တွေအကြောင်းကိုလည်း Customer တွေက သိနေပြီးဖြစ်တဲ့အချိန် ဆိုပါတော့။…
Website ဆိုတာ ကိုယ့် Product တွေ Services တွေရဲ့အကြောင်းကို ၂၄နာရီပတ်လုံး ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပါ❗️
By T-WORK SYSTEM | May 18, 2018 | 0
တစ်ချို့တွေက ပြောကြပါလိမ့်မယ်။Facebook Page ရှိနေပြီပဲ Website ဘာလို့လုပ်နေမှာလဲဆိုပြီး။ Website က ဘာလဲ ❓ Website ကောင်းတစ်ခုရှိရုံနဲ့ ဘာတွေလုပ်လို့ရသလဲ❓❓ Website ဆိုတာ ကိုယ့်Product တွေ Services တွေရဲ့အကြောင်းကို ၂၄နာရီပတ်လုံး ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပါ!! ❌၂၄နာရီ ၀င်ကြည့်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဆိုင်ပိတ်သွားသည့်အတွက် Customer လွတ်သွားရတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေလည်း ရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး ဒါဆိုရင် မေးစရာရှိလာပါလိမ့်မယ်။ Facebook Page မှာလည်း မဖော်ပြပေးနိုင်ဘူးလား ❓ ဟုတ်ကဲ့ ။ ဖော်ပြပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Facebook Page မှာက ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်သူက ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ စိတ်ဝင်တစား ၀င်ကြည့်သွားလဲဆိုတဲ့ Customer တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို သိမ်းထားပေးနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး Website မှာ ဆိုရင်…
⁉️Website က လုပ်ငန်းအတွက်အမှန်တကယ် အကျိုးကျေးဇူးရှိတာသေချာရဲ့လား⁉️
By T-WORK SYSTEM | May 16, 2018 | 0
⁉Website က လုပ်ငန်းအတွက်အမှန်တကယ် အကျိုးကျေးဇူးရှိတာသေချာရဲ့လား⁉ အမှန်ပါပဲ ဘယ် Social Media နဲ့ မဆို ချိတ်ဆက်ပြီး Online ပေါ်မှာတင် ၀င်ငွေရှာလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာမှ ရှိစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ T-WORK SYSTEM ( https://www.tworksystem.com ) မှ ဖန်တီးဆောင်ရွက်ပေးနေသော Website များတွင် SEO Service ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက်ကြောင့် Customer များအနေဖြင့် ကိုယ့်Product များကို Google Search Engine ကပဲရှာရှာ မည်သည့် Social Media ကပဲရှာရှာ အလွယ်တကူ ရှာဖွေကြည့်ရှုဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Website တစ်ခုရှိပြီဆိုတာနဲ့ Website က ကိုယ့်Productတွေရဲ့ အကြောင်းကို 24နာရီ ပြသပေးထားသောကြောင့် Customer များအနေဖြင့် မည်သည့်အချိန်မှာမဆို…